Xiaomi dia tsy handefa ny Redmi Note 7 Pro any Espana | Androidsis
Ny Redmi Note 7 Pro dia tsy halefa any Espana
Herinandro vitsivitsy lasa izay dia natolotra ny Redmi Note 7 Pro amin'ny fomba ofisialy, finday voatendry hanjakazaka ny eo afovoany amin'ny Android. Niteraka fahalianana be dia be avy amin'ny mpampiasa ny telefaona, izay manantena ny hamoahana azy. Tsy ho ela dia hanomboka any Chine ny telefaona, araka ny voamarina tato ho ato. Saingy tsy nisy na inona na inona fantatra momba ny fanombohany teo amin'ny tsena eropeana. Na dia toa misy vaovao ratsy aza.
Satria ireo mpampiasa any Espana izay manantena ny hividy an'ity Redmi Note 7 Pro ity dia manana vaovao ratsy. Xiaomi mihitsy no nanamafy izany ity smartphone ity dia tsy halefa eo amin'ny tsena nasionaly. Vaovao ratsy, na dia te hamela anay amin'ny antony maro aza ny marika tsy hitrangan'izany.
Ny iray amin'ireo antony lehibe dia ity Redmi Note 7 Pro ity Smartphone iray novokarina ho an'ny tsenan'i India. Tsy maintsy tsiahivina fa ny tsena India dia manan-danja kokoa amin'ny marika finday. Ho an'i Xiaomi indrindra, izay no mpivarotra be indrindra eto amin'ity firenena ity. Noho io antony io dia miaraka amina fahita matetika no alefan'izy ireo modely ho azy manokana. Izany no zava-misy amin'ity afovoan-tany ity, araka ny efa nolazain'izy ireo.
Noho izany, Smartphone iray izay tsy kasain'izy ireo alefa amin'ny tsena hafa. Ka ny zava-drehetra dia manondro fa tsy halefa any Shina ihany koa, na dia efa voalaza aza fa hisy fampisehoana tsy ho ela ao amin'ny firenena. Na dia natao ho an'ny tsena indiana aza ity maodely ity, tsy izany ihany no antony tsy hanombohan'ny marika sinoa ny telefaona amin'ny tsena hafa. Misy lafiny iray hafa manandanja lehibe izay tsy maintsy raisina.
Araka ny efa fantatrao angamba, satria mitranga amin'ny kinova finday Android an'ny finday Android dia matetika misy olana mifanentana amin'ireo tarika fifandraisana. Satria miankina amin'ny tsena dia tsy mitovy ny fanampiana ho azy ireo. Ity no zava-nitranga tamin'ity tranga ity, miaraka amin'ny Redmi Note 7 Pro. Satria ny tarika fifandraisana dia tohanan'ity fitaovana ity, ataovy tsy mifanaraka amin'ny tsena hafa izy ireo. Araka ny nolazain'izy ireo avy tamin'i Xiaomi, tsy mifanaraka amin'ireo izay anohanan'ny mpandraharaha telefaona any Espana izy ireo. Izay ataon'izy ireo fa tsy mandeha amin'ny laoniny ny telefaona any Espana.
Noho izany, ho an'ireo mpampiasa mikasa ny hividy an'ity Redmi Note 7 Pro any amin'ny magazay an-tserasera ity dia tsara kokoa raha tsy. Hatramin'ity fitaovana ity tsy hiasa tsara eo amin'ny tsena Espaniôla. Izay tsy isalasalana fa fandaniam-bola tsy misy ilana azy ho an'ny mpampiasa. Amin'io lafiny io dia manana safidy hividy modely hafa natolotry ny marika ho an'ny tsena espaniola izy ireo. ny naoty 7. Modely misy any Espana amin'ny vidiny mahavariana.
Tsy misy isalasalana, vaovao ratsy ho an'ireo mpampiasa liana amin'ity elanelam-potoana ity. Hatramin'ny nahatongavany tamin'ny famaritana tsara ho an'ity tsena ity, miaraka amin'ny fiheverana manokana ny famolavolana ilay fitaovana. Ny tsy fantatsika dia raha hisy ny kinova vaovao izay hanana ny masontsivana mitovy aminy, fa amin'ny tsena eropeana no hamoahana azy. Avy amin'ny marika sinoa dia tsy nilaza na inona na inona taminay izy ireo. Saingy manantena izahay fa hahalala bebe kokoa momba izany amin'ny fotoana iray.
Ahoana ny hevitrao momba ity fanapahan-kevitry ny orinasa ity? Azo takarina ny ampahany aminy, satria ny tsena indiana dia tena zava-dehibe ankehitriny ho an'ny marika amin'ny Android. Zavatra efa hitantsika tamin'ny Samsung, izay nandefa ny maodely vaovao vaovao antonony, avy amin'ny elanelana Galaxy M eny an-tsena, miaraka amin'ny vokatra tsara amin'ny resaka varotra. Maromaro ny marika marobe izay mampanantena ny hanaraka an'ity paikady ity, ka azoko antoka fa ity Redmi Note 7 Pro ity dia tsy ho finday avo lenta farany hitrangan'izany. Ka tsy maintsy hanana tranga hafa isika amin'ity lafiny ity atsy ho atsy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Ny Redmi Note 7 Pro dia tsy halefa any Espana
Mpianatra 16 no voasambotra tany India noho ny filalaovany PUBG Mobile
Misy afisy ofisialy vaovao an'ny Oppo Reno mipoitra ary antsipiriany maro momba ny karazany sy ny vidiny koa